🥇 ▷ Xil wareejinta qaraarka sare ee Honor 20S waa la sifeeyaa ✅
Xil wareejinta qaraarka sare ee Honor 20S waa la sifeeyaa
Shalay waxaan kugula dardaarmey markii ugu horreysay sharaftii 20S, Terminal uu sii daatay ka dib markii uu ka gudbey bogga taageerada Google. Malaha waa isla garoonkii aan aragnay isbuucii hore, Mudane 20 SE oo ku dhacay calaamada dukaanada Shiinaha. Maanta waxaan kahadalnaa taleefankan mar labaad, sababtoo ah bixinta tayo sare leh ee naqshadeynta ugu dambeysa ee qalabkan ayaa la sifeeyay, taas oo shaki la’aan noqon doonta mid ka mid ah xooggeeda.
Telefoonkii ugu dambeeyay ee aan aragnay waa Honor 9X, Terminal uu la yimaado kumbuyuutarka ‘Kirin 810’, oo markii ugu horreysay loo isticmaalay astaanta. Marka la eego tani waxay noqon doontaa processor-kaaga cusub ee dhex-dhexaadka, waan la yaabanahay inaan aragno sida ay ugu diyaarinayaan taleefan kale oo leh Kirin 710, processor Kuwaas oo aan hore uga helnay Sharafta 10 Lite, Mudane 20 Lite iyo Honor 8X. Sikastaba, waxaan sugi doonnaa inaan ogaano astaamaha qeexan ka hor intaanan ka faalloon dhinacan.
Sharafta 20S waxay noqon laheyd kan ugu horreeya ee sumadda leh Android 10
Haddii shaandheynta shalay la sameeyo ay run tahay, Mudane 20S wuxuu noqon doonaa taleefanka ugu horreeya ee sumadda shirkadda oo suuqa u sii galaya Android 10 oo horay loo sii raray. Tani waxay noqon lahayd mid mudan in la xuso, maadaama sida caadiga ah astaanta aysan soo saarin Terminalyo leh nooca cusub ee Android illaa sanadka hadda uu ku dhow yahay. Laakiin hey Waxa noo keenay warkan waa qaabeynta uu Maamuuskan 20S yeelan doono, kaas oo lagu duubay muuqaal tayo sare leh oo umuuqda mid ay astaantu u isticmaali doonto kor u qaadista taleefanka.
Sidaan ku soo aragnay gudaha Twitter, Mudane 20S wuxuu soo bandhigi doonaa sedex kamaradood gadaasha qaab qaab toosan. Daqiiqadii ugu horeysay waxaan u maleynay in naqshaddu ay la mid noqon karto tii Huawei P30 Lite, laakiin maya, Qaybta kamaraddu waxay fidsan tahay tooshka loo yaqaan ‘Flash Flash’, oo aanan ku arkin qaabka Huawei. Kaamirooyinkaasi waxay moodayaan inay la jaan qaadayaan xag weyn, xagal ballaadhan iyo qoto dheer. Faahfaahinta kaliya ee la ogyahay waxaa laga soo qaadan karaa sawirka laftiisa waana sidaas Sharaftan 20S waxay soo saari doontaa kamarad 48 megapixel ah.
Waxaan sidoo kale ka arki karnaa dhabarka dambe inuusan jirin akhristaha faraha, sida walaalkiis ka weyn, laakiin taasi waxaan ka helnay dhinaca midig ee taleefanka, Meel raaxo leh oo horay u soo bandhigtay natiijooyin wanaagsan Sharafta 20. Dhamaadka midabku wuxuu la mid yahay kan Honor 20 Pro wuxuuna u taagan yahay muuqaal ahaan midabka cagaaran. Hadda waa inaan ogaano inta kale ee astaamaha ay ku jirto iyo haddii ay ugu dambeyntii la imaan doonto processor-ka cusub ama mid horay u soo maray.